"Account Hack ( Recovery လုပ်ပြီးခိုးယူ ) ခံရခြင်းမှကင်းဝေးအောင် လုပ်ထားသင့်တာလေးတွေ" | Online Service Center Myanmar -->
"Account Hack ( Recovery လုပ်ပြီးခိုးယူ ) ခံရခြင်းမှကင်းဝေးအောင် လုပ်ထားသင့်တာလေးတွေ"
မိမိတို့Facebook အကောင့်ကို Security မြှင့်ထားချင်တယ်ဆိုရင်
Facebook မှာ Security ပိုင်းအနေနဲ ့လုပ်ထားသင့်တာလေးပါ
Security Settings ထဲကို ဝင်ပြီး အောက်ပါတို ့ကို လုပ်ထားပါ။
၂။ မိမိဖုန်းနဲ့အသက်သွင်းထားပြီး Login Approvals ကို on ထားပါ။
၃။ Your Trusted Contacts မှာ ကိုယ့်မိသားစုဝင် (or) အရင်းနှီးဆုံး စိတ်ချရဆုံး သူငယ်ချင်း အနည်းဆုံး ၃ ယောက်ကနေ ၅ ယောက် ထည့်ထားပါ။
ကိုယ်မသိတဲ့ Log ကိုတွေ ့လျှင် Remove လုပ်ပစ်ပါ။
၅။ Where You're Logged In ထဲကို မကြာခန စစ်ဆေးပါ ကိုယ်မသိတဲ့ Device တွေ IP တွေ Location တွေ နဲ ့ဝင်ထားတာတွေ ့လျှင် Password ချိန်းပြီး Sign Out All လုပ်ပစ်ပါ။
အဲ့ဒီ ( ၅ ) ချက်ကို လိုက်နာပြီး လိုက်လံလုပ်ဆောင်ထားရင် သင့်အကောင့် 99% Safe ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ် အကောင့် Hack ( Recovery လုပ် ခိုးယူ ) ခံရခြင်းမှ
Facebook Login Alerts ( ကိုယ့်အကောင့်ထဲကို တခြားသူကဝင်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ..? )
Facebook Login Approvals ( ကိုယ့်အကောင့်ထဲကို သူများမဝင်နိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ..? )
လုံခြုံရေးပိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်တဲ့ tool ကို Login Approvals လို့ခေါ်ပါတယ်။ Login Approvals ကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင် သင့်အကောင့်ကိုဝင်ဖို့ စကားဝှက်အပြင် ကုတ်တစ်ခုကို သင့်ဖုန်းထဲပို့ပေးပြီးဝင်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ Login Approvals အကြောင်းပိုမိုလေ့လာကြည့်မယ်။ https://www.facebook.com/help/909243165853369
By : Facebook Security Team
Aung Kyaw Soe ( 7.12.2016 - 4:30 PM )
#AKS #AKS_Sharing #Facebook #FacebookSecurity #FacebookAccount #FacebookAccountSecurity